လိပ်ဆူးရွှေ၊ (အပင်) - ဝီကီပီးဒီးယား
Barleria pronitis in Hyderabad, India.
၃ ပုံပမ်း သွင်ပြင်
၅ Barleria prionitis Linn လိပ်ဆူးရွှေ(လိပ်သရွှေအဝါ)
မြန်မာ နိုင်ငံ အနှံအပြားတွင် ပေါက်ရောက်သည်။ အထူးသဖြင့် မြေလွတ် မြေလပ်၊ စားကျက်များ၊ ကုန်းတန် များတွင် တွေ့ရသည်။ ၎အပင်သည် နွေရာသီတွင် ခြောက်သွေ့ ကုန်ပြီးလျှင် မိုးရာသီတွင် အများအပြား ပေါက်ရောက် ကြသည်။ စွတ်စိုသော အချို့ဒေသများတွင် ၁၂ ရာသီလုံးလုံး ပေါက်ရောက်သည်ကို တွေ့ရသည်။ အထူးသဖြင့် အထက် မြန်မာပြည်တွင် အများအပြား ပေါက်ရောက်သည်။ သဘာ၀ အလျောက် ပေါက်ရောက်သည်။
ပဥစငါးပါး ပြုတ်ရည်ကို ချင်းခြောက်မှုန့် ဖြူး၍ ကလေးကို တိုက်ကျွေးလျှင် ကလေးများ ဝမ်းပျက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ ပဥစငါးပါး သတ္တုရည် (သို့) ၎င်းသတ္တုရည်ကို နှမ်းဆီဖြင့် ရောချက်ပြီး ဝဲယားနာ၊ ပွေးနာနှင့် အနာပေါက် များကို လိမ်းရ၏။လိပ်ဆူးရွှေ ရွက် ကို ပြာချပြီး ထောပတ်၊ နှမ်းဆီ စသည်တို့နှင့် ရောလိမ်းသော် အနာများကို အမြန် အသားနု တက်စေပြီး အပျောက် မြန်စေ၏။ အရွက် ပြုတ်ရည်ကို ကလေး၊ လူကြီးများ သောက်လျှင် ချွေး ကောင်းစွာ ထွက်စေ၍ အဖျားနှင့် တကွ ချောင်းဆိုး အအေးမိခြင်း ကိုပါ ပျောက်ကင်း စေပါသည်။ အရွက် သတ္တုရည်ကို ကင်းကိုက်သော ဒဏ်ရာပေါ်သို့ ဆွတ်ပေးခြင်းဖြင့် ကင်းဆိပ်ကို ပြေစေ နိုင်သည်။ ရောင်ရမ်းသော နေရာများပေါ်သို့ လိမ်းပေး လျှင်လည်း အရောင်ကျ စေနိုင်သည်။ အရွက် ကျကျ ပြုတ်ရည်ကို ခပ်နွေးနွေး ငုံပေးသော် နဲ့နေသော သွားများကို ပြန်ခိုင်လာ စေသည်။
အပင် - အပွင့်ကို အစွဲပြု၍ ခရမ်း၊ အဖြူကြား အဖြူ၊ အဝါဟု ၄ မျိုးကွဲပြား၏။ အဝါမျိုးမှာ အပေါဆုံးဖြစ်၏။၎အပင် ၄ မျိုးစလုံး၏ အပင်အရွက် အနိမ့်အမြင့် များစွာ ကွားခြားမှုမရှိပါ။အပင်မှာ ခြုံပင်ငယ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၂ ပေမှ ၅ ပေအထိ မြင့်၏။ အကိုင်းအခက် အလွန်များ၏။ပင်စည်၊ အကိုင်း၊ အခက်တို့၌ ခၽွန်ထက်သော ဆူးကလေးများ များစွာရှိ၏။
အရွက် - အရွက်မှာ ဆိုင်ထွက်၏။ ရှည်မျောမျောပုံ ရွက်ထိပ်ခၽွန်ပြီး ရွက်ရင်း သွယ်သည်။ရွက်နားညီ၊ ရွက်ကြောထင်ရှားပြီး ရွက်ညှာရှည်သည်။ အရွက်အဖျားတွင် ဆူးကလေးများ ရှိသည်။
အပွင့် - အဝါရောင်ရှိသည်။ ရွက်ညှာရင်းရှိ အဆစ်မှထွက်သည်။ ပွင့်ချပ် ၅ ခု ဆိုင်၍ ကတော့ပုံသ႑ာန်ပွင့်သည်။ အတွင်း၌ ဝတ်ဆံမှုံ ၂ ခုထွက်သည်။ အပွင့်အရှည်မှာ ၁ လက်မခန့်ရှိသည်။
အသီး - ဆူးရှိ၏။အလျား ၁ လက်မခန့်သာရှိသည်။ အစေ့မှာ ၂ စေ့မျှသာ ပါ၏။အသီးမှာ နုလျှင်စိမ်း၍ ရင့်လျှင် အပြာရင့်ရောင်ဖြစ်သွားသည်။
Barleria prionitis Linn လိပ်ဆူးရွှေ(လိပ်သရွှေအဝါ)[ပြင်ဆင်ရန်]
Botany Term : Barleria prionitis Linn
Species/Family : Acanthaceae
ပုံသဏ္ဌာန် : အပင် - ချုံပင်ငယ် မျိုးဖြစ်၏။ ၂ ပေ မှ ၅ ပေ အထိ မြင့်၏။ အကိုင်း အခက် အလွန် များ၏။ ပင်စည် အကိုင်း အခက် တို့၌ ချွန်ထက် သော ဆူးကလေး များစွာ ရှိသည်။ အရွက် - ရွက်ဆိုင် ထွက်သည်။ ရှည်မျောမျော ပုံသဏ္ဌာန် ဖြစ်ပြီး ရွက်ထိပ် ချွန်ပြီး ရွက်ရင်း သွယ်သည်။ ရွက်နား ညီသည်။ ရွက်ကြော ထင်ရှား၏။ ရွက်ညှာ ရှည်သည်။ အပွင့် - အဝါရောင် ရှိသည်။ ရွက်ညှာရင်းမှ အဆစ် ထွက်၏။ ပွင့်ချပ် ၅ ခု ဆိုင်၍ ကတော့ ပုံသဏ္ဌာန် ပွင့်၏။ အတွင်းမှ ဝတ်ဆံမျှင် ၂ ခု ထွက်၏။ အသီး - အသီး၌ ဆူးရှိ၏။ အလျား ၁ လက်မ သာသာ ခန့် ရှိ၏။ အစေ့ ၂ စေ့ သာပါ၏။ အသုံးပြုနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ : ပဉ္စငါးပါး၊ အရွက်၊ အမြစ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တွေ့နိုင်သောနေရာများ : မြန်မာ နိုင်ငံ အနှံ့ အပြား ၌ ပေါက်ရောက် သည်။ အထူး သဖြင့် မြေလွတ် မြေလပ် စားကျက်များ ကုန်းတန်းများ တွင် တွေ့ရသည်။သဘာ၀ အလျောက် ပေါက်ရောက်သည်။ အသုံးဝင်ပုံ : အာနိသင် -မြန်မာ ဆေးကျမ်းများ အလိုအရ လိပ်ဆူးရွှေ သည် ခါး၍ ဖန်သော အရသာ ရှိ၏။ ဆာလောင် မွတ်သိပ်ခြင်း ကို ဖြစ်စေ၏။ အရေပြား ရောဂါနှင့် သွေးရောဂါ တို့၌ များစွာ အကျိုးပြု၏။ အသုံးပြုပုံ- ပဉ္စငါးပါး ၁။ လိပ်ဆူးရွှေ ပဉ္စငါးပါးကို ကြိတ်၍ နှမ်းဆီနှင့် ရောချက်ပြီး ယားနာ၊ ပွေးနာနှင့် အနာပေါက် များကို လိမ်းရ၏။ အရွက် ၁။ လိပ်ဆူးရွှေရွက် ကို ပြာချပြီး ထောပတ်နှင့် ရောလိမ်းသော် မကျက်နိုင်သော အနာများ အသားနုတက်၍ အမြန်ပျောက်၏။ ၂။ အရွက်ရည် ကို လူကြီးများ သောက်လျှင် ချွေးကောင်းစွာ ထွက်၍ အဖျားနှင့် တကွ ချောင်းဆိုး အအေးမိခြင်းပါ ပျောက်ကင်း၏။ ၃။ အရွက်ရည်ကို ကင်းကိုက်သော ဒဏ်ရာပေါ်သို့ ဆွတ်ပေးခြင်းဖြင့် ကင်းဆိပ် ကို ပြေစေသည်။ ရောင်ရမ်းသော နေရာများပေါ်၌ လိမ်းပေးလျှင် လည်း ပျောက်၏။ ၄။ အရွက်ကို ကျကျ ပြုတ်၍ ခပ်နွေးနွေး ငုံပေးသော် နဲ့သော သွားများ ပြန်ခိုင်စေ၏။ ၅။ လိပ်ဆူးရွှေ ရွက်နှင့် ကွက္ကရာ ဆတူ ရောကြိတ်၍ သွားခြေတွင် ကပ်ထားသော် သွားနာ သွားကိုက်နှင့် သွားခြေရင်းမှ သွေးယိုစီးခြင်း ပျောက်၏။ ၆။ အရွက်ကို ကြိတ်၍ ရသော အရည်တွင် ပျားရည် သို့မဟုတ် သကြား သို့မဟုတ် ရေနွေးနှင့် ရော၍ ကြွေဇွန်းငယ် ၂ ဇွန်းမျှ တိုက်သော် ကလေးများ ချောင်းဆိုး ဖျားနာ သလိပ် ထကြွခြင်း များပျောက်၏။ ၇။ အရွက်ကို ပြာချ၍ ဆန်ပုန်းရည် နှင့် ရောသောက်သော် ဖောရောင်ခြင်း နှင့် ရေဖျဉ်းကို ကျဆင်းစေ၏။ ချောင်းဆိုး ရောဂါ ကိုလည်း ပျောက်စေသည်။ ၈။ အရွက် ကြိတ်၍ ရသော အရည်ကို ခြေဖဝါး၊ ခြေချောင်း ကြား၌ ဖြစ်သော ဝဲနာ၊ ယားနာ တို့အား လိမ်းပေးလျှင် ပျောက်၏။ 
Barleria prionitis in Hyderabad, India.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လိပ်ဆူးရွှေ၊_(အပင်)&oldid=383716" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇၊ ၀၈:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။